မယ်သံ: June 2012
ဒီမနက် မေမေ ရေချိုးပြီး အခန်းထဲအ၀င် သမီးလေး က အိပ်ယာပေါ်ကနေ မျက်လုံးလေး အပြူးသားနဲ့ ရီပြတယ် ။ ဘေးမှာ ဖေဖေ က အိပ်တုန်း ။ သမီးကလေး က အဲလိုဘဲ ဘေးမှာ ဖအေ မအေ တယောက်၂ သာ ရှိနေပစေ ။ အိပ်ယာက နိုးလဲ မအော် မဂျီ ဘဲ ဘေးမှာ တိတ်တ်ိတ်လေးနေတယ် ။
မေမေ အပြင်ထွက်တော့ သမီးလေး လဲ အပြင်လိုက်ထွက်လာတယ် .မေမေ့ ကို ဘောင်းဘီလေး ဟပြီး လက်ညှိူး ထိုးပြတယ်. သူ ဘွတ်နေဘီ ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့ ။ ခန နေဦး သမီးရေ မေမေ အလုပ်သွားဘို့ ပြင်နေတယ် ဆိုပြီး သူ့အဘွားကို ခေါ်ပေးရတယ် ။
သူ့အဖေ အိပ်ယာနိုးတော့ ဒီနေ့ သမီးလေး အကြောင်း တပုဒ်လောက်ရေးဦးမယ် Weight ချိန် ပေးပါဦး အရပ်လေး တိုင်းပါဦး 0.9 m ပြည့်ပြီလားလို့ ။ ဒီနေ့ မှာ သမီးလေး 12kg (26.45 lb) နဲ့ 34 inches( 0.863 m) ရှိနေပါပြီ ။
Shop & Save နား က ဒီမြင်းရုပ် ကိုတွေ့ရင် လက်ညှိုး ထိုးတော့တယ် တခါစီး နဲ့ မ၀ အနည်းဆုံး ၂ ခါတော့ စီးတယ် ။
သမီးလေး က စကားတော့ မပြောသေးပါဘူး ။ မေမေ ရေ မေမေ ဆိုတာတော့ ပြောပါတယ် ။ ရောက်ခါ စ က ဖယား (ဘုရား) ကို ပြောပေမဲ့ ခုတော့ မပြောပြန်ဘူး ။ Old MacDonald သီချင်း ကို မေမေ က အီးယား အီးယား အို လို့လိုက်ဆိုရင် မေမေ့ပါးစပ် ကို သေချာ စူးစူးစိုက်စိုက် ကြည့်တယ် ။ ကစားကွင်း ကလူတွေ အိမ်နီးချင်းတွေ နဲ့ အိမ်ရှင် Uncle က အီးလိုပြောကြပြီး ဘိုးဘွား ဖေမေ က ဗမာ လိုပြောကြတော့ သမီးလဲ ဘာကိုပြောရမှန်း မသိဘူးထင်တယ် ။
တခုခု လိုချင်ရင် မေမေမငြင်းနိုင်မဲ့ ချစ်စရာ မျက်ဝန်းလေး နဲ့တောင်းဆိုလေ့ ရှိတယ်
ဒီအင်္ကျီ လေးဝတ်ပေး မှဘဲ သမီးလေး ဟာ အ၀ါရောင် ကို အတော်ကြိုက်မှန်း သိရတယ် ။ 22 ရက် ညက တိုပိုင်းရိုး ညဈေးမှာ ၀ယ်လာတာ ကြီးနေသေးတော့ ပြန်ချွတ်မယ် လုပ်တာ ငိုလိုက်တာ ခေါင်းကိုလဲ ရမ်း ရမ်းပြီး အချွတ်မခံဘူး ။ အင်္ကျီလေး ၀တ်ပေးပြီးတော့ မှန်ကို ပြေးကြည့်သေးတယ်လေ ။
ညဈေး မှာ သူက အပေါ်က အရုပ်လေး ကိုတွေ့တော့ လက်ညှိုးထိုး ပြီး ဖအေ ကို အဲလို ကြည့်တယ် ။ ဖေဖေ ကလဲ သမီးလေး လိုချင်တာ ဆိုတော့ ၀မ်းသာအားရ ၀ယ်ပေးတာပေါ့ ။ နောက်တော့ လက်ကောက် ၊ နောက်တော့ နာရီ ..သမီးလေး က လက်ညှိုးထိုးလိုက် ဖေဖေ က ၀ယ်ပေးလိုက်နဲ့ မေမေ နဲ့ ဘွားဘွား ကတော့ အိမ်သုံးပစ္စည်းဆိုင်မှာ ကြည့်နေတယ် ။ နောက်ထပ် ဖိနပ်တွေ ကြက်ရုပ်လေးတွေ ကို လက်ညှိုးထိုးတော့ ဖေဖေ က မေမေ့ ကို စစ်ကူခေါ်တော့တယ် ။ သမီးလေး ၀ယ်ခိုင်းတာ သူမငြင်းချင်ဘူးလေ..၀ယ်ရင်း များလာရင် မေမေက ပြောတော့မှာ .....။
သမီးလေး က ညနေ ကစားကွင်းသွားရမယ်ဆိုပျော်နေရော ။ သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီး ရှိတယ်လေ ။ မနေ့ က ၂၉.၆.၁၂ မှာ သူ့သူငယ်ချင်း ရဲ့ တွန်းလှည်း ကို ကိုင်တာ ဟိုတယောက်ကလဲ မကိုင်ရဘူးဆို လက်ကို တွန်းဖယ်တယ် သမီးက ထပ်ကိုင် ဟိုက တွန်းဖယ် နဲ့ နောက်တော့ သမီးက ခြေဆောင့်ပြတယ် မျက်နှာ ကို ကြည့်တော့ ပြုံးပြုံးကြီးလေ ..နောက် မေမေ နဲ့ အနားက လူတွေ က သမီးတို့ ကိုကြည့်နေမှန်းသိတော့ လှည့်ကြည့်ပြီး မျက်စိ မှိတ်ပြတယ် ..မေမေ တို့ မှာ သမီး နောက်နေမှန်း သိတော့ အံ့သြောပြီး ရီ ရတယ် ....အဲလို လဲ နောက်တတ်ပြောင်တတ်တဲ့ သမီးလေး ပါ ။
ဖေဖေ့ နာရီ ကြီးနဲ့ အိတ်ကိုလွယ် ဖုန်းတလုံး နဲ့ သူလဲ အလုပ်သွားမဲ့စတိုင်
ဖေဖေ က မနက် ၆း၃၀ ဆို အလုပ်သွားရမှာ ရေချိုးနေလို့ မေမေ က ကော်ဖီဖျော် နေချိန် သမီးလေး နိုးလာပြီး မီးဖိုထဲလာချောင်းတယ် ။ ရေချိုးခန်းတ့ခါး ကို တဘုန်းဘုန်းထုောတ့ ဖေဖေ က သမီးလား လို့ ပြန်အော်တော့ သူ ကျေနပ်သွားပြီး အခန်းထဲပြန်ဝင်သွားတယ် ။ မေမေ ကော်ဖီ ဖျော်ပြီး အပြင်ထွက်လာတော့ သမီးကို သူ့အဖေ နာရီ ကြီး နဲ့ ဖုန်းကို ကိုင် အိတ်လွယ်ပြီး ထွက်လာတော တွေ့တော့ ရီလိုက်ရတာ ။
သမီးလေး ဟာ အလှ အပ သိပ်ကြိုက်တယ် မိတ်ကပ် ကို မျက်နှာမှာ လိမ်းရမှန်း နှူတ်ခမ်းနီ ကို နှူတ်ခမ်း မှာ ဆိုးရမှန်းသိတယ် ။ လက်ကောက်လေးတွေ ဆွဲ ကြိုးလေးတွေ လေဒီရှူးဖိနပ် လေးတွေ ကို ကြိုက်လဲကြိုက် ပူလဲပူဆာတတ်တယ် ( မေမေ က လေဒီရှူး လုံးဝမကြိုက်သူပါ ခြေချောင်းထိပ်တွေကားတော့ လေဒီ ရှူးက ဆွဲချုပ်ထားတာကို မကြိုက်ဘူး)
စကားမပြောသေးပေမဲ့ သီချင်းညီးသလို အသံလေးတွေ ပေးတယ် ။ က လဲ ကတတ်တယ် ။ ဗမာ အက လို လက်ကလေး ကွေးတာ တင်မဟုတ်ဘဲ သူသိပ်ကြိုက်တဲ့ Garfield Spotlight Dance ထဲကလို ခြေထောက်ထိုး ပြီးလဲ ကတတ်တယ် ။
I Love to Move It! များ အသံကြားရင် အိပ်မလို့ လှဲနေတာ ကနေ လက်ကို မြှောက်ပြီး ကမလို့ မအေ ကိုကြည့်တယ် ။
အလှ ကြိုက်သလို ကစားတာ နဲ့ စားတာ ကို လဲမက်တာပါဘဲ ။ အစားအသောက် ကို တအားကြီး အထူးတလည် အပင်ပန်းခံပြီး ပြင်ဆင်ပေးစရာ ကျွေးစရာ မလိုတဲ့ အတွက် တော်သေးတယ် လို့ ဆိုရမယ် ။ ပုံမှန် မနက် ကို ဆန်ပြုတ်တအိုးတည်ထားရင် ပြီးပြီ ။ နေ့လည် အိပ်ယာနိုး ကို ပန်းသီး သဘောင်္သီး ဖရဲသီး ငှက်ပျောသီး စပျစ်သီး ..စတဲ့ အသီးတမျိုးမျိုးရယ်၊ ကစားကွင်း သွားရင် ကစားလို့မော ရင် စားဘို့ မုန့်လက်ညှိုး ၊ ချိစ် ဘီစကစ် စတာလေး တွေ ၀ယ်ထားပေးရင် ရပြီ ။ ည ၁၀ နာရီ နို့ 125 ml ၊ ၁၂ နာရီ 125 ml နဲ့ ညဘက် ၃ နာရီ ကနေ ၅ နာရီ ထိ 180 ml သောက်တယ် ။
ကစားတာတော့ တယောက်ထဲလဲ အရုပ်လေးတွေ နဲ့ ကစားတတ်တယ် ။ သမီးလေး က သူု့အရုပ်တွေမှာ မစ်ကီးမောက်စ် လေးတွေ ကို ထက် Tweety ၊ Garfield နဲ့ ယုန် ရုပ်လေးတွေ ကို ပိုချစ်တယ် ။ ဟိုနေ့ က အရုပ်လေးတွေ ကို နို့ဗူးတိုက်နေတာ သူ့အဘွားမြင်တော့ ဟေမာတော့ နောက် ကလေး မျှော်နေပြီ လို့ပြောတယ် ။ တော်ပါပြီ သမီးရယ် တယောက်ထဲတောင် မေမေ ချစ်လို့ မ၀ဘူး ရယ်။
ခု ဆို ညဘက် အိပ်ရင် ဖေဖေ မေမေ နဲ့ မှ အိပ်ချင်တယ် ။ သူ့ အဘွားခေါ်လို့ မရတော့ဘူး ။ တခါတလေ ဘွားဘွားက အတူ အိပ်ချင်လို့ပါ သမီးရယ် လာအိပ်ပါဆို အပြောတောင် မခံဘူးး ..သူ့ကို ဇွတ်ခေါ်မှာစိုးလို့ ညဘက် အဲဒီအခန်းကို မ၀င်ဘူး မေမေ သွားရင်တောင် လိုက်မ၀င်ဘဲ အခန်းဝကနေ မအေ ကို လာခေါ်တယ် ။ သမီး က ခု မှ ၁၅ လ ကျော်ဘဲ ရှိသေးတယ် ပြောတာ ဆိုတာ တော့ တော်တော် နားလည်တယ် ။ မေးရင် ခေါင်းညိတ်ခေါင်းခါ လုပ်ပြီး ဖြေတတ်တယ် ။
ခု ဆို ညဘက် သမီးလေး ကို ပုံပြောပြတယ် ။ ပုံရောင်စုံ စာအုပ်တွေ ယူပြီး အဲဒီအထဲက အရုပ်လေးတွေ ကို လက်ညှိုးထောက်မေးတယ် ။ ကြောင်ပုံလေး ကိုတွေ့ရင်တော့ မီ မီ လို့ ပြောတာ ချစ်စရာ ။
မေမေ့ အတွက်တော့ သမီးလေး ဘာလုပ်လုပ် ဘာပြောပြော ချစ်စရာ ဘဲ ဖြစ်နေတာပါဘဲ ။ ။
Posted by Thandar Lwin at Saturday, June 30, 2012
2012 ကို နှစ်သစ်ကူး ထဲက အလုပ်အသစ်ရှာမယ် လို့ တွေးထားတဲ့ မယ်သံတယောက် အခုထိ CV တောင် မပြင်ဖြစ်သေးပါဘူး ။ လုပ်ရမဲ့ အလုပ်တခု ကို မဖြစ်မနေ ဆိုတဲ့ တွန်းအားမရှိမချင်း အသားကျ ရေစီးထဲမှာ မျော ကောင်းနေဆဲ ။ ဆင်သေကောင် ဖောက်စားရင်း ရေအနက်ဘက် ကို ကိုယ်ပါအတူမျောပါသွားမဲ့ ကျီးမိုက် လိုလား ဒါမှမဟုတ် ရေအပူချိန် မြင့်လာတာ ကို သတိမထားမိဘဲ ဒယ်အိုး ထဲ မှာ အလုက်သင့် ကူးခတ်နေတဲ့ ဖားလိုဘဲလား လို့ တွေးမိပါရဲ့ ။
ကျမ ကို အားမရ တဲ့ မေမေ့ ပြောနေကျ စကားပုံလေး ကို သတိရ မိပါတယ် ။
ခု ရေတွင်းတူး ခုရေကြည်သောက်လို့ မရဘူး..တဲ့ အလားတူ တခြားစကားပုံလေးလဲ ရှိပါသေးတယ် ...:P
နေရာတခု ကို အထိုင်ချ ဘို့အတွက် ပြင်ဆင်ရင်း ဒီလထဲမှာ (2012 June) တော့ သေချာမှူတခု ရှိ်သွားပါပြီ ။ 2012 နှစ်ဆန်းပိုင်းလောက်တုန်းကတောင် ဘယ်လိုမှ မစဉ်းစားဖြစ်သေးတဲ့ မစဉ်းစားဝံ့သေးတဲ့ အဲဒီကိစ္စ ကို မြန်မာ နှစ်သစ်မကူးခင်လေးတင် ဖေ့ဘွတ်ကတဆင့် ရင်းနှီးချစ်ခင်ရတဲ့ မိတ်ဆွေတယောက် ရဲ့ အထိုင်ချမှူ ကနေ အားကျ သူ့ရဲ့ အသေးစိတ်ကြုံတွေ့ရတာကိုပြောပြ တာ နားထောင်ရင်းနဲ့ ကိုယ်တိုင် စိတ်ပါလာပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်မြန်တဲ့ ကျမ အမြန် ကွန်ဖမ်း လုပ်လိုက်တာ ခုမှ ပြန်တွေးကြည့်တော့ ဒီကိတ်စ ၂လလောက်အတွင်း သေချာသွားခဲ့တာပါလား လို့တွေးရင်း အံ့သြောမိပါတယ် ။ ပမာဏ မသေးလှတဲ့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက် အတွက် အမှားအမှန် ကို ကိုယ်နဲ့ လက်တွဲရင်ဆိုင်ရမဲ့ ယောက်ျား လက် ကို တင်းတင်းဆုပ်ပြီး အားတင်းထားစမ်းပါ အချစ်ကလေးရေ ဆိုတဲ့ သီချင်းကို အလွတ်ကျက်ရဦးမယ် ..လို့ ။
သေချာမှူ တခု ကို ၁၀.၆.၂၀၁၂ က လုပ်အပီးမှာတော့ မိဘတွေ ဗီဇာက ဒီလ ၂၆ ရက်မှာပြည့်မှာမို့ အပြန် လေယာဉ်လက်မှတ်ကို တနင်္ဂနွေ ကျတဲ့ ၂၄.၆.၂၀၁၂ မှာ လုပ်ထားခဲ့ပါတယ် ။ နောက်သမီးလေးရဲ့ ပတ်စ် ကို Extend တိုး ပါတယ် ။ ခါတိုင်း ၃ ရက်ဘဲစောင့်ရတဲ့ ပတ်စ် က တပတ်လောက်စောင့်ရတဲ့ အတွက် စိတ်ပူရင်း အပြန်လက်ဆောင်အတွက် Shopping ထွက်ရတာနဲ့ ပိတ်ရက်တွေမှာလဲ မနားရပါဘူး ။အမေ ကလဲ ပြန်ဘို့အတွက် အထုတ်ကြီးအထုတ်ငယ် တွေ ထည့်နေပါပြီ ။၁၈.၆.၂၀၁၂ မှာ LTVPass approve ဖြစ်လို့ ICA မှာ ကတ်ထုတ်သွားရင်း မိဘတွေ ကို လဲ ဗီဇာတိုးကြည့်ဘို့ ကြိုးစားတော့ တလ ထပ်ပေးတာမို့ လေယဉ်လက်မှတ် ကို ၂၆.၇.၂၀၁၂ ကို ပြန်ပြောင်းရပါတော့တယ် ။ အမေ လဲ အထုတ်တွေ ပြန်ဖွ အလုပ်တော့ နည်းနည်း ရှူပ်သွားတာပေါ့ ။
သက်ပြင်းမော ကို ချပြီး စိတ်အေးလက်အေးနေမယ် မကြံလိုက်ပါနဲ့ .......... ခု လ တလ ရဲ့ ရက်၂၀ ကျော်သွားပြီလေ ။ ထုံးစံအတိုင်း လမကုန်ခင် ပေးရမဲ့ ဒီလ Claim အတွက် workdone တွေကို Site မှာ သွားကြည့် ရမယ် ။ ကွန်ဒို တလုံးရဲ့ အပီးသတ်ပိုင်း ဆိုတော့ တချို့ လုပ်ကွက်လေးတွေ မျက်စိထဲမမြင်ရင် မကျန်သင့်တာတွေ ကျန်နေရင် ကိုယ့် ရုံးကဘဲ နစ်နာ မှာမို့ ၂၁ ထပ်အမြင့် ထိ တက်ပြီး ကြည့်ခဲ့ပါသေးတယ် ။
ရောက်နေတဲ့ ၂၁ ထပ်ကနေ ခြေတုန်တုန် လက်တုန်တုန် နဲ့ ဓါတ်ပုံလေး ရိုက်လာတယ်..း)
Site Manager and Rebar Foreman တို့နှင့် အမှတ်တယ
Site ထဲမှာ ဖုန်းတလုံးနဲ့ ဟိုရိုက်ဒီရိုက် အရိုက်ကောင်းတော့ အလုပ်သမားတွေ ကလဲ ဒီဖုန်းကိုသုံးချင်ကြတာပေါ့ ။ သူတို့ ဖုန်းအဟောင်းလေး ၀ယ်ချင်ပါတယ် လို့ သုံးလေးယောက် ၀ိုင်းတောင်းဆိုကြတော့ အလုပ်ရှူပ် လှချေရဲ့ လို့ တညီးညီး ညီးနေတဲ့ မယ်သံ စင်လင်းစကွဲး ကို ညနေရုံးအဆင်း သွားရပါသေးတယ် ။ သွားရင်း "မယ်သံ ညီးအလုပ်ရှူပ်နေတာလား အရှူပ်တွေ လုပ်နေတာလား " လို့ မေးတတ်တဲ့ ချစ်လှစွာသော ယောကျား ကို လွမ်းမိပါသေးတယ် (သြော် ငါ့နှယ်နော်)
ချစ်ရပါတဲ့ ကိုရွှေဦးကလဲ ၂၇/၂၈.၆.၂၀၁၂ မှာ စာမေးပွဲ ရှိတာမို့ ပိတ်ရက်တွေ မှာ သူ့ဝေယျာဝစတွေ ရော သူ စားချင်တာလေး တွေ ရော ချက်ပေးရင်း မအားရပြန်ပါဘူး ။
ဒီလို မောရ စိတ်ပင်ပန်း ရတာတွေ ကို ဖြေအပြီး " ဖြေနိုင်တယ် မယ်သံရေ " လို့ ဖုန်းဆက်ပြောသံလေး နဲ့ အမောမဖြေအားပါဘူး ..."ကိုယ် ဘာမှ မစားရသေးဘူး အိမ်မှာ ဘာရှိလဲ ..လမ်းမှာ ၀င်မစားတော့ဘူး" ဆိုတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အပြောကြောင့် စွပ်ပြုတ်လေး လုပ်ဘို့ မီးဖိုထဲ အမြန်ဝင်ရပါတယ် (ထမင်း ဆိုရင် ည၁၀ နာရီကျော်မှ စားရင် အစာကြေဘို့မလွယ်ဘူးလေ) ။
ကိုရွှေဦး အတွက် ပြင်ဆင်ဘို့မီးဖို ထဲသွားတုန်း မအိပ်သေးတဲ့ အသဲကျော် လေးက အော်လို့ သူ့ပါမီးဖိုထဲခေါ် ငြိမ်အောင် စပျစ်သီးလေး လေး ငါးလုံး ရေဆေးပြီး ငြိမ်ဆေးကျွေးရပါသေးတယ် ။ ဒီလိုကျွေးရင်း နဲ့ ဖေ့ဘွတ်မှာ ကျောက်ဆည်မှာ ကျောင်းအတူ တက်တဲ့ ညီမလေးတယောက် Share တဲ့ ကာတွန်းလေး ကိုသတိရ ပြီး ပြုံးမိပါတယ် ။
ခုတလော ဖေ့ဘွတ်မှာ အန်တီ စု ကမ္ဘာတလွှား သွားနေတဲ့ ပုံတွေ အများကြီးတွေ့ရပါတယ် ။ ဘယ်နေရာ ရောက်ရောက် ပွဲလည်တင့် လှ တဲ့ သူမ ရဲ့ ဂုဏ်ကျက်သရေ ကို လေးစား မြတ်နိုးမိပါတယ် ။ အန်တီစု ပုံတွေ ၊ နောက် ရခိုင် ပြည်နယ်အတွက် အလှူကောက်ခံ မှူတွေ ဘဲအများအပြား တွေ့ရတဲ့ ခုတလော ဖေ့ဘွတ်မှာ TheAsianParents က တင်တဲ့
အထက်ပါ စာတမ်းလေး ကိုတွေ့တော့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ တွေ အပြည့် နဲ့ ကိုယ့်နှလုံးသားလေး ကို ကျေနပ်ရပါတယ် ( လောဘ ဒေါသ သောက တွေ ခန မေ့ချင်ယောင် ဆောင်ထား ပေါ့လေ) ။
ဘာတွေ ဘဲ ဘယ်လောက် မအားအား သမီးလေး မျက်နှာကို မြင်ရပြီး ၊ သမီးလေး ကစားကွင်းသွားကစားတဲ့အခါ အဖော်လိုက်ပေး ၊ ညဘက် သမီးလေး ကို ပွေ့ဖက်ပြီး အိပ်ရတဲ့ အခါ ကျမအတွက် အင်အား တို့ကတော့ အလိုလို ရလာတာပါဘဲ ။
ချစ်သမီးလေး ဓါတ်ပုံရိုက်မယ် ဆို ပြုံးဘို့ကတော့ ပြောနေစရာ ကိုမလိုဘူး...း)
ကစားကွင်း က မြန်မာတွေ နဲ့ အမှတ်တယ ( ရှေ့က ကလေးအပြာလေး က ဗမာ မဟုတ်ဘူးနော်)
ဒီလ မှာ ဖားအောက် ဆရာတော်ကြီး စင်္ကာပူ ကို ကြွလာတဲ့အတွက် နေ့ဆွမ်းအလှူလေးတွေ (ဆွမ်းချိုင့် ပို့တာပါ) ကုသိုလ် ယူဖြစ်ပါတယ် ။ ပိတ်ရက်တွေမှာ ဆွမ်းကွမ်း ပိုလျှံပေမဲ့ ကြားရက်တွေမှာတော့ ရှားပါးတာကြောင့် အိမ်မှာလဲ ဘုန်းကြီးကျောင်း သွားပို့ပေးနိုင်တဲ့ အဖေ ရှိတာကြောင့် ကြားရက်တွေ မှာ ဆွမ်းဟင်းချိုင့် ပို့ဖြစ်ပါတယ် ။
ဖားအောက်ကျောင်း ကို ပို့လှူတဲ့ ဆွမ်းဟင်းများ
အားလုံး ဘဲ ကျန်းမာ ရွှင်လန်း ပြီး ဘ၀ အမောသောကတွေ နည်းကြပါစေ ရှင် ။
Posted by Thandar Lwin at Friday, June 29, 2012
Htet San - A Burmese’s request to all Medias : “Stop PushingaReligion War to my Country”
ံHtet San - A Burmese’s request to all Medias : “Stop PushingaReligion War to my Country”
Posted by Thandar Lwin at Tuesday, June 12, 2012
မိတ်ဆွေ ဟောင်း မှ မိတ်ဆွေ ကောင်း သို့
မိတ်ဆွေ သစ် မှ မိတ်ဆွေ စစ် သို့ .........း)
ဒီအပတ်ထဲမှာ (2012 မေ နောက်ဆုံးအပတ်) ကျမ ရဲ့ သူငယ်ချင်း အင်ဒို မလေးတယောက် သူ့ပြည်သူ့ရွာ ကို အပြီး ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။
သူ ပြန်တော့မယ် လို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချ အပြီး သူ့အလုပ်မှာ ထွက်စာ တင်ပြီးတော့ ကျမအိမ် ကို လာခဲ့ပါတယ် ။ ပြီးတော့ သူ ဘာကြောင့် ဒီလို ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ၊ ဘာ ဆက်လုပ်ဘို့ စိတ်ကူးရှိတယ် ဆိုတာ ကို ပြောပြခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီလို သေချာဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြခဲ့ပေမဲ့ သူ့ဆုံးဖြတ်ချက် မှန်မမှန် ရယ်လို့ တော့ ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်နေတာ နဲ့ အကြောင်းစုံ ကို ရေရေ ရာရာ သိမယ် လို့ သူထင်တဲ့ ကျမ ကို လာပြောပြခဲ့ဟန် တူပါတယ်။
သူပြောပြတဲ့ အကြောင်းတွေ ကို သေချာ နားထောင်ပြီး ကျမ ရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ ကို ပြောပြခဲ့ပေမဲ့ အထင် ဆိုတာ မှန်နိုင်ခဲလို့ ကျမ အမြင် ဟာ သူ့အတွက် တစုံတရာ ပိုနာကျင်မှာ ကို တော့ စိုးရိမ် မိပါတယ် ။
ကိုယ်တိုင်းပြည် မဟုတ်တဲ့ နေရာ မှာ ကိုယ့်လူမျိုး မဟုတ် တဲ့ သူတို့ နဲ့ ခင်မင် ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းတော့ အမှတ်တယ ရေးထားချင်ပါတယ်။
ကျမ စကာင်္ပူ မှာ ပထမ ဆုံး လုပ်ခဲ့ တဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပြီး အဲဒီမှာ ၂ နှစ်ခွဲ ကြာခဲ့ပါတယ် ။
အဲဒီ အလုပ် မှာတုန်းက working environment မှာ ဘယ်လောက်တောင် ပျော်ခဲ့လဲဆိုရင် ကျမ ရဲ့ ပိတ်ရက် စနေ တနင်္ဂနွေ တွေ မှာတောင် မှ ရုံး သွားတက်တဲ့ အထိပါဘဲ ။
QS အလုပ်က ရုံးချိန် နဲ့ တင် အချိန်မလုံလောက်တာ မို့ ကျမ တို့ေ ဆွးနွေး ချင်တာ ရှိရင် ပိတ်ရက် တွေ တယောက် နဲ့ တယောက် အေးအေးဆေးဆေး စကားပြော ဆွေးနွေး တိုင်ပင် ကြတာမျိုးပါ ။
ကျမ အလုပ်ဝင် ခါစ ကိုယ်တိုင် လဲ စကားပြောမကျွမ်းကျင် ပေမဲ့ ရုံးမှာ လူမျိုးတူ တယောက်မှ မရှိလို့ ဒီလိုဘဲ ကြိုးစားပြီး ကိုယ်ပြောချင် တာ ကို သူတို့ နားလည်အောင် သူတို့ပြောတာ ကို ကိုယ် တတ်နိုင်သမျှ နားလည်အောင် ကြိုးစားရပါတယ် ။
ကံကောင်းတာက ရုံး မှာ အင်ဒို ၊မလေး၊ ဖိလစ်ပင်း ၊ အိန္ဒိယ စသဖြင့် လူမျိုးစုံ မို့ ဘော့စ် က ရုံးချိန်မှာ အချင်းချင်း အင်္ဂလိပ် လိုကလွဲရင် မပြောရဘူး သတ်မှတ်ထားပါတယ် ။ နားမလည် တဲ့ စကားတွေ အတွက် အချင်းချင်း သံသယ မ၀င် စေချင်လို့ပါတဲ့ ။ ကိုယ်လက်လှမ်းမှီ တဲ့ စကား ဘဲ ဆိုတော့ နားလည်ဘို့တော့ သိပ်မခက်ပါဘူး ။
ဒီအထဲ မှာ ကျမ နဲ့ ပိုရင်းနှီးကြ တာက မန်နေဂျာ (မလေးတရုတ်) ရယ် အင်ဒိုမလေး အမ်ဘာ ရယ်ပါ ။
အင်ဒို မလေး အမ်ဘာ နဲ့ ကျမ က အလုပ်ဝင် တာ ၅ ရက်ဘဲ ကွာတော့ ပိုပြီး ရင်းနှီးပါတယ် ။ ကျမ တို့ ရဲ့ အလေ့အထ တွေ စိတ်ထားတွေ က နီးစပ်တာ လဲပါမယ် ထင်ပါရဲ့ ။ သူ အလုပ်စ၀င်တော့ နေတာ Punggol မှာဆိုတော့ ရုံး နဲ့ ဝေးပါတယ် ။ ရုံးချိန် က များတဲ့ အထဲ အမြဲ ရုံးဆင်းတောင် OT လုပ်ကြရသူတွေ မို့ ကျမ က သူ့ ကို အိမ်ပြောင်းခိုင်းပါတယ် ။
ခက်တာ က သူတို့ လူမျိုးတွေ က အူဘီ ဘက်မှာ ရှားပြီး မြန်မာတွေ လို အဆောင် ပြန်ငှားတာ မျိုးမရှိတာပါ ။ အဲတော့ ကျမ က သူ့ကို မြန်မာတွေ အိမ် မှာဘဲ နေဘို့ ပြောပါတယ် ။ ကျမ တို့အိမ်မှာတော့ အခန်းလွတ်မရှိတာကြောင့် သူ့ ကိုတခြား နီးစပ်ရာမှာဘဲ ရှာပေးရပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ မြန်မာတွေ ကလဲ အိမ်မှာ လူမျိုးခြား နဲ့ မနေချင်ကြလို့ သူအေးဆေးတာ စရိုက် က မြန်မာ လိုဘဲ ယောကျားလေးတွေ နဲ့ တရုန်းရုန်း မရှိပါဘူး လို့ အာမခံ ပြီးထားရတာပါ ။ နောက်တော့ လဲ အဆင်ပြေ သွားပါတယ် ။ သူလဲ DK မှာ လုပ်တဲ့ ၂ နှစ်လုံး အဲဒီ တအိမ်မှာဘဲ အဆင်ပြေစွာ နေသွားခဲ့ပါတယ် ။
ပြောရရင် သူနေတာက မိန်းကလေးတွေ ချည်း နေတဲ့ အဆောင် မို့ နောက်ပိုင်းမှာ ကျမ ထက် မြန်မာ အစားအစာ ဆို ဒေသ အလိုက် ဘယ်လို ဆိုတာ ပိုသိ ပါတယ် ။ ဖုန်းကတ် ဆိုလဲ ဘယ်ဖုန်းကတ် က မိနစ် ပိုရတာ ၊ စီးတီးဟော ပင်နဆူလာ မှာ ဆိုလဲ ၀င်းမြန်မာ ကို ပိုကြိုက်တာ တို့ ရဲရင့် က အသုပ်ကို သူမကြိုက်တာ တို့ ၊သူ့ အင်ဒိုက သူငယ်ချင်းတွေ လာလည်လို့ ပင်နဆူလာ မှာ ဘဲ လိုက်ကျွေးတယ် တို့ ပြောပါတော့တယ် ။
ကျမ အိမ်ကလဲ ရုံးနဲ့နီးပြီး တခါတလေ ရုံးမှာ ပီးမလာတာတွေ ရုံးသွားဘို့လဲ ကျမ အမျိုးသားက မကြည်ဖြူ တဲ့ အခါတွေ မှာ သူတို့ ကျမ အိမ်ကို လာပြီး လုပ်ကြ ကျမချက်တာတွေ စားကြ နဲ့ ပျော်စရာ ပါ ။ ကျမ အမျိုးသားဆို သူတို့ နဲ့ တွေ့ရင် စကားပြောရင် ကျမ အမြဲ ပြုံးပျော် နေတယ် သူ နဲ့ဆို ပြောစရာ စကားသိပ်မရှိဘူးလား နဲ့ အမြဲမေးပါတယ် ။
DK မှာ စာချုပ် ၂ နှစ် ပြည့်သွားတော့ တခြားကို ပြောင်းဘို့ စဉ်းစားရပါတယ် ။ အဆင်မပြေတာ မရှိပေမဲ့ လခ နည်းတာရယ် ဘောနပ်စ် မရှိတာရယ် ကိုယ်ပိုင်အချိန် နည်းလွန်းတာကြောင့် ဒီထက် အဆင်ပြေရာ ကို ရှာရတာပါ ။ ကျမ တို့ သုံးယောက် က ပြောင်းတဲ့ အချိန်လဲ သိပ်မကွာပါဘူး ။ ဘော့စ် က ဆို စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး ပြန်လာချင်တဲ့ အချိန် ပြန်လာကြ လို့ ပြောပါတယ်။
ကျမ က တနေရာ ကို ပြောင်းလာပြီး မန်နေဂျာ (မလေးတရုတ်) ရယ် အမ်ဘာ ရယ် က တနေရာ ကို အတူ ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။
ဖိလစ်ပင်း မလေး မဒယ် နဲ့ မိသားစု ၊ မယ်သံ ၊ အမ်ဘာ ၊ မန်နေဂျာ မလေးတရုတ် နဲ့ စိနီယာ မလေး တရုတ် တို့ပါ ။
ပြောင်းသွားပြီး ပေမဲ့ ပိတ်ရက်တွေ မှာ သူတို့ အိမ်လာရင် လာ မလာရင် အပြင်မှာ ဆုံပြီး သွားကြ စားကြ ရုပ်ရှင် ကြည့်ကြပါတယ် ။
မယ်သံ ကိုယ်ဝန် ကြီး နဲ့ ၊ မဒယ် လဲ သူ့သမီးလေး ကို အိမ်မှာ ထားခဲ့ပြီး လာတွေ့တယ် ။
သုံးယောက် သား ပြုံးပျော်နေတာ ။
ခုနောက်ပိုင်းတော့ သူတို့ အိမ်လာရင်လာ မလာရင် မယ်သံက အပြင်မျာ ချိန်းရင် ပျက်ကွက်တာ များပါတယ် ။ နောက်အလုပ် က သက်သာတာကြောင့် အချိန်အားတွေ မှာလူမှူရေးအဖွဲ့အစည်း ကို ကူညီ တာတွေ ရော ကြောင့်ရောပေါ့ ။ သူတို့ ချိန်းတိုင်း မသွားဖြစ်သလို အိမ်လာကြမယ် ဆို လဲ အိမ်မှာ မရှိတာ များပါတယ် ။ ပတ်တိုင်းလုပ်ဖြစ်တာကြောင့် DK မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ဖိလစ်ပင်း မလေး မဒယ် နဲ့ အဆက်မပြတ်သလို အမ်ဘာ နဲ့ တော့ အနည်းဆုံး ၂ ပတ် တကြိမ် ဖုန်းပြော လို့ အဆက်တော့ မပြတ်ခဲ့ပါဘူး။
အမ်ဘာ က ဘုရားသခင် အပေါ်မှာ ယုံကြည်ချက် ပြင်းတဲ့ ည ခရစ်စ်ယန် မလေးပါ ။
သူ ငယ် ထဲက အဖေ ဆုံးသွားလို့ သူတို့ မောင်နှမ ၃ ယောက် ကို မုဆိုးမ အမေ ကြီးက ပြုစု ပေးရတာ ။ စာတော် တဲ့ သူ အထက်တန်းပြီးချိန် မှာ ကျောင်းဆက် တက်ချင်ပြီး အခွင့်အရေး မရှိတာကြောင့် နေ့တိုင်းလိုလို ဘုရားကျောင်းကို သွားပြီး ဆုတောင်းခဲ့ပြီး မထင်မှတ်ဘဲ ကျောင်းဆက်တက်ဘို့ အခွင့်အရေး ရခဲ့တယ် လို့ ပြောပါတယ် ။ ဥပုသ် သီတင်း စောင့်ရမယ် ဆို မပျက်မကွက် ၊ တနင်္ဂနွေ ဘုရားကျောင်း သွားရမယ် ဆိုရင် လဲ ဘယ်လောက်အိမ်ရေးပျက်ပျက် မပျက်ကွက်အောင် သွားတာပါ ။
မယ်သံ နဲ့ ဘယ်လောက် ခင်ပါစေ ၊ ရုံးနောက်ကျ လို့ Time Card ခိုးရိုက်တာလဲ မလုပ်ပေးပါဘူးး ။ သူ့ ရဲ့ ပြင်းထန် တဲ့ ဘာသာရေး ယုံကြည်မှူ ရိုးသား တဲ့ စိတ် ကို ချစ်ခင်ရပါတယ် ။
သူ့ဘ၀ လေး ကလဲ ရုန်းကန် ရတာတွေ ပြည့်နေပါတယ် ။ ဘ၀ မှာ ငယ်စဉ်ထဲက အိမ်ပိုင်မရှိတော့ အိမ်ငှားဘ၀ ခနခန ပြောင်းရလို့ အိမ်လေး တလုံးတော့ လိုချင်ပါတယ် တဲ့ ။
သူ ရဲ့ စုငွေ အိမ်ဝယ်ဘို့ အင်စတောမန် အတွက် ငွေပြည့်တော့ ၀ယ်လိုက်ပြီး သိပ်ပျော် နေရှာတာပါ ။ သူဝမ်းသာ ပြီး လိုက်ကျွေးတဲ့ ညစာ စားပြီး BUS 51 အပေါ်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိဘဲ ၂ယောက်ထဲ စကားပြောပြီးပြန်လာရတဲ့ ည ကို သတိရမိပါတယ် ။
ဘ၀ တွေ ဟာ မှန်းထားသလို မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ။ သူဝယ်လိုက်တဲ့ သူ့ဇာတိ မှာ သူ့ အကိုရယ် အမေ ရယ် နှစ်ယောက်ရှိတာမှာ သူ့အကို က ချတ်ခ်ျကျောင်းတက် သီချင်းဆိုနေရင်း ရုတ်တရက် လဲကျ ပြီး ဆုံးသွားပါတယ် ။ သူ့အမေ ကလဲ အဲဒီမှာ တယောက်ထဲ ဘယ်လိုမှ မနေချင်တော့တာကြောင့် အဲဒီ အိမ်လေး ကို ရသလို ရောင်းပြီး သူ့အမေ ကိုခေါ် စင်္ကာ ပူ ကိုပြန်ပြောင်းလာခဲ့ပါတယ် ။ဟိုကနေ သူတို့ သားအမိ ၂ယောက်နေဘို့ အခန်း ရှာ ပေးပါ ဆိုတော့ မယ်သံက နေ့စေ့ခါနီး ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ပါ ။ အဆင်ပြေမဲ့ အိမ်ခန်း ကို ရုံးအပြန် ညဘက်တွေ မှာ သွားကြည့် ရတာကြောင့် အမျိုးသားမှာ စိတ်ပူ ရ ပါတယ်။
သူပြောခဲ့တဲ့ အမှတ်ရ စရာ စကားလေး က သေတဲ့ သူက ပြီးသွားတာ ကျန်ခဲ့တဲ့သူက မဆုံးနိုင်တဲ့ ပူပင်သောကတွေ နဲ့ တဲ့ ။
နောက် မယ်သံ ကို သားလေးဆုံးတုန်းက မျက်ရည် ကျ မရဘူးဆိုတာ သူနားလည် ပြီ တဲ့ ..သူ့အကို ဆုံးတာ သူရော သူ့အမေ ရော မျက်ရည် ကျ မရ လို့ပါတဲ့ေ လ။
သူ ပိုက်ဆံ ရှာဘို့ လိုတယ် ရှာရဦး မယ် ဆို ပြီး ခုတော့ အနာဂတ် အတွက် သေချာ မပြင်ဆင်ရသေးဘဲ စိတ်ခံစားမှူ ကို ဦးစားပေး နောက်အလုပ်တခု မရှာဘဲ လက်ရှိ အလုပ် က ထွက်ပြီး ပြန်သွားပြီ ။
အချစ် ဆိုတဲ့ ခံစားမှူကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ အနာဂတ် ကို မရေ ရာ မှူက နေ ပြန်စ မယ် ဆိုတော့ ဂရုဏာ ဒေါသ လဲ ဖြစ်ရပါတယ် ။ ( ကိုယ့်တုန်းကတော့ စိတ်ပျော့တယ် ဆိုပေမဲ့ အလုပ်ပျက်ရအောင် တော့ မဟုတ်ခဲ့ဘူး)
နောက်ဆုံးသွားနှူတ်ဆက် စားကြပြီး အပြန်မှာ Mall ထဲမှာ ဈေးဝယ်တော့ ဟိုမှာ အစားအစာ တခုခု ရောင်းမယ် ဆိုပြီး ထည့်စရာ ပလတ်စတစ် ဘူးကြီးတွေ ၀ယ်တော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး မျက်ရည် ကျ ရပါသေးတယ် ။ နင်ကတော့ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေး စလုပ်ဖြစ်သွားပြီ ။ အဆင်ပြေရင် ငါ့ ကို ရှယ်ယာ ခေါ်ပါ ။ အဆင်မပြေလဲ ပြန်လာခဲ့ပါ ..ဘာဖြစ်ဇြစ် အဆက်အသွယ် မပြတ်စေနဲ့ လို့ မှာရပါတယ် ။ ဖေ့စ်ဘွတ် ကျေးဇူး နဲ့ အဆက်ပြတ်မသွားဘူးလို့ တော့ ထင်ပါတယ်လေ။